Posted by Ree Noe Mann at 8:50:00 PM
ကျနော်တစ်နေရာကိုရယူလိုက်ပါပြီး... တော်သေးတယ် ဖိနပ်ဘဲခိုးလိုးဟီ
ကိုရီနိုရေ.. မြန်မာပြည်မှာ အကျင့်ပျက်တာတော့ ကြာရော့။ ဖိနပ်ပဲ ခိုးသွားတာ ကံကောင်းတယ် မှတ်ပါ။ :P
ဟုတ်တယ်မောင်လေးရေ... ဘုရားကျောင်းကန်တွေမှာ တွေမှာလဲ ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လေ။ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရတယ်။ လူတွေရဲ့ စည်းကမ်းပေါ့မောင်လေးရယ်။ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
စာရိတ္တတွေ ပြန်ကောင်းဘို့ဆို နောက်ထပ် မျိုးဆက် ၂ ဆက်လောက်ပြုပြင်ရမယ်ထင်တယ်..။
အဲဒီလိုမျိူတွေကြားဖူးတာကြာပြီ..ကြုံတော့မကြုံဘူး သေးဘူး..ဘုရားကျောင်းကန်တို့..အလှူတို့မှာ လေ..ဟင်းးးးးးးးးးးး(သက်ပြင်းချသံ)...
မြန်မာပြည်မှာ အကျင့် စာရိတ္တပိုင်း
ကို တော်တော်လေးကို ပြင်ယူရမယ်
အရာရာသတိရှိနေဖို့ တော့ အရေးကြီးတာပေါ့
ကိုရီနိုရေ လာဖတ်သွားတယ်။ အိမ်ကိုတောင်ပြန်ချင်လာပြီ။ ငိုချင်ရက်လက်တို့နော်။ သူတို့လည်း အကျင့်ဘယ်ပျက်ချင်ပါ့မလည်းနော်။ နားလည်ပေးလိုက်ပါ ကိုရီနိုရယ်။ ညီမလေး ပါးလုံး
အဲလို အကျင့်စရိုက်မျိုးတွေရှိတဲ့သူတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတာတော့ တော်တော်ကြာပါပြီ .. ဒါပေမယ့် ဘုရားပေါ်မှာတော့ မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော် ... စိတ်အေး လက်အေးနဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုဖို့ လာတဲ့ ဘုရားဖူးတစ်ယောက်အတွက် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်မျိုးမို့လို့ စာနာတတ်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်ခဲ့သင့်ပါဘူး .. နောက်ပြီး ဖိနပ်တစ်ရံဆိုတာကလည်း ရောင်းစားရင်တောင် ဘယ်လောက်များများရမှာ မို့လို့လဲ ... ဒါတွေက ထားပါလေ .. တစ်နေ့နေ့မှာတော့ အရာအားလုံး နေသားတကျဖြစ်သွားအောင် ပြင်ဆင်ဖန်တီးနိုင်မယ့် အချိန်တစ်ခါ တစ်ခုရောက်လာဦးမှာပါ .. လောလောဆယ် ရောက်မလာခင်တော့ ဖိနပ်စင်မှာ အပ်ထားလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ... :D
လူတွေက ဘုရားပေါ်မှာတောင် ဘာကြောင့်ဖိနပ်ခိုးဖို့ အထိဖြစ်လာတာလဲ???? သူတို့ တွေ ရဲ့ အခက်ခဲက ဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားနေလဲ????
ကိုကြီးရီနိုရေ..............လဲပေါင်းများစွာ နဲ့ 
တကယ်တော့ ယူသွားတဲ့သူလဲ တကယ့်ကိုလုပ်စရာ မရှိတော့လို့ လုပ်သွားတာနေမှာပေါ့
ကိုယ့်ဆီက ယူသွားတာလေးက သူတို့ဘဝအတွက် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့
ဒီလိုတွေ ကြားရ သိရတာ စိတ်မသက်သာဘူး .. ဖိနပ်တရံအတွက်တောင် လူတွေ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားနေကြပြီလား ..
မပြောချင်ပါဘူးဗျာ... အဟဲ ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀ .........
ဘုရားမှာ အလှူလုပ်ခဲ့တာကိုး အဲ သူ့မှာစီးစရာမရှိလို့ ယူသွားတာပဲဖြစ်မယ်..ရောင်းစားဖို့တော့ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။ လှူလိုက်တယ်လို့ သဘောထားပြီး
ဘုရားပေါ်မှာတောင် လုပ်ရဲတဲ့သူကို အံ့သြစရာပဲဗျာ။
ပညာမဲ့လို့ လား။။။အကျင့်ပဲမကောင်းလို့ လား။ လား ပေါင်း များစွာနှင့် တွေးနေမိတယ်။။။
လူ့အကျင့်စရိုက်တွေတော့ ပျက်ပြားလာတာပဲ အစ်ကိုရေ...
ဒါကဒီလို ရှိတယ်.... ဟိုဟာ ကဟို လိုရှိတယ်...။